Muxuu ka yiri Frank Lampard suurtagalnimada uu ku noqon karo badalka Sarri ee kooxda Chelsea??? – Gool FM
(England) 12 Feb 2019. Halyayga kooxda Chelsea iyo kubada cagta England Frank Lampard ayaa iska fogeeyay suurtagalnimada uu ku noqon karo badalka Maurizio Sarri ee kooxda Chelsea.
Waxaa shaki weyn la galinayaa mustaqbalka macalinka reer Talyaani Maurizio Sarri ee kooxd Chelsea, kadib guuldaradii niyad jabka ahayd ay kala kulmeen Manchester City, taasoo sababtay inay ka dhacaan booska 6-aad ee dhanka kala sareynta horyaalka Premier League.
Frank Lampard oo haatan leeliya kooxda Derby County ayaa lala xiriirinayaa inuu markale dib ugu soo laaban doono garoonka Stamford Bridge, bal si uu u noqdo badalka Sarri, lakiin waxa uu xaqiijiyay inuu doonayo inuu sii joogo kooxdiisa Derby County.
“Ma xiiseynayo arrintan, waan ixtiraamaa kooxda Chelsea, sidoo kale waxaan ixtiraam buuxa u hayaa Maurizio Sarri, sidaas darteed kuma farxi doono warkan”.
“Waxaan ka shaqeeyaa halkan Derby County, xaqiiqdii waan la socdaa xaalada kooxda Chelsea, waxaana rajeynayaa inaan ku arko heerka ugu fiican isla markaana ay sameeyaan isbadal dhanka natiijooyinka ah”.
Waxaa xusid mudan in Frank Lampard uu soo xirnaa maaliyada kooxda Chelsea muddo sanado ah, waxaana loo arkaa inuu yahay gooldhaliyaha taariikhiga ah, inkasta uu ahaa ciyaaryahan khadka dhexe ah.